बिहिबार, ०३ असार, २०७८, राष्ट्रिय डेली
आदरणीय मेयर साब,
मेयर साब हरपलको सम्झना । मैले मात्र हैन अहिले सिङ्गो महानगरका जनताले तपाईँलाई सम्झिरहेका छन् । हिजो चुनावी मैदानमा एमालेलाई भोट हाल्नेले होस् अथवा गाई या मसालमा भोट हाल्नेले होस्, हरेक विराटनगर वासीले मैले जस्तै तपाईँलाई सम्झिरहेका छन् ।
मेयर साब अहिलेको अवस्था सामान्य छैन । कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोर्नेहरूको रासन सक्किएको छ । हो तपाईँले रातदिन गरिरहनु भएको छ । आफुले प्रयोग गर्ने गाडी समेत संक्रमितलाई हस्पिटल पुर्याउन सजिलो होस भनेर दिनुभएको छ । ब्याक्तिहरूका घर घरमा अक्सिजन सिलिन्डर लिएर पुग्नुभएको छ । हिजो चुनावी मैदानमा तपाईं उत्रीदै गर्दा भिम पराजुलिले जित्नु पर्छ विराटनगरले पक्कै प्रगति गर्छ भन्ने युवा म पनि हुँ । अहिले हरेक विराटनगर वासीको आसा भरोसा तपाईं नै हो ।
तर, तपाईँसँग केही प्रस्न गर्न मन लागेको छ । मेयर साब विराटनगर १९ का मुसहर बस्तिका जनता तपाईँका हुन कि होइनन ? १७ नं. वडाका मुस्लिम सामुदायका जनता तपाईँका हुन कि होइनन ? सामान्य अवस्था हुँदा समेत आर्थिक चपेटामा परेका ती जनताले अहिले सम्म राहत किन पाएनन ? तपाईं क–कस्को घरमा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर पुगिरहनु भएको छ ? जनताकोमा कि तपाईँका कार्यकर्ता को मा ?
मेयर साब दिनभरी तातो घाममा निधार बाट पसिना चुहाएर ठेला चलाएर दैनिक गुजारा गर्ने मजदुरहरूको घरमा चुल्हो बलेको छ कि छैन ? हिजो चुनाबमा सुर्य, मसाल र गाई चिन्हमा भोट हाल्ने जनताको घरमा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर तपाईं जानुभएको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नहरू म जस्ता धेरैको मनमा अहिले कुदिरहेको छ ।
मेयर साब अहिले जनतालाई आकाशे पुल र भ्यु टावर चाहिएको छैन । अहिले जनता भोकबाट बाच्न चाहान्छन । त्यँहा छुट्याइएको बजेटले अहिले जनता बचाउनुस । अहिले पार्टी र कार्यकर्ता हेर्ने दिन हैन तपाईं अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर चाहे एमाले कार्यकर्ता होस या राप्रपा कार्यकर्ता या समाजवादी सबैकोमा जान आवश्यक छ । सबै नगरवासी तपाईँका जनता हुन् । यो विषम परिस्थितिमा सबैले तपाईँलाई सम्झिरहेका छन् । सबैलाई तपाईँको आवश्यकता छ । अहिले तपाईँले आफन्त र कार्यकर्ता नहेर्नुहोला । सबै नगरवासीलाई उत्तिकै प्रथमिकतामा राखेर काम गर्नुस् । म जस्ता हजाराँ युवा भोलि तपाईँको पक्षमा हुने छन् । भोलिका दिनमा फेरि चुनाब आउदा चाहे जुन पार्टिका कार्यकर्ता वा व्यक्तीले तपाईँको आवश्यकताको महसुस गरून् । अहिले महामारीमा जनतालाई रोग र भोकबाट बचाउनुहोस् । सँधै जनताले तपाईँको जय जयकार गर्नेछ्न र सम्झिरहने छन् ।
कटवाल दिपक, विराटनगर